Wasiirka gaashaandhiga dowlada Djabouti oo ka dagay Magalada Baladweyen | Somalisan.com Home
Wasiirka gaashaandhiga dowlada Djabouti oo ka dagay Magalada Baladweyen 12/2/2012 3:21:00 P
Wafdiga waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay magaalada maamulka Gobolka Hiiraan iyo taliska AMISOM ee ku sugan Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan
Wararka ka imaanaya Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu soo gaaray wafdi heer sare ah oo ka socda Dowlada Jabuuti oo ciidamo ay ka joogaan B/weyne. Wafdiga waxaa hogaaminayay wasiirka gaashaandhiga Jabuuti kuwaasoo ka soo dagay goor dhawayd garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif Aiport. Wafdiga waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay magaalada maamulka Gobolka Hiiraan iyo taliska AMISOM ee ku sugan Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wasiirka gaashaandhiga waxaa lagu wadaa inuu kulamo gaar gaar ah la kala qaato taliska Jabuuti ee magaca amisom iyo maamulka Gobolka Hiiraan. Dhanka kale imaanshihayha wasiirka gaashaandhiga Jabuuti waxaa ay ka dhigeysaa inuu yahay mas’uulkii ugu sareeyay ee jabuuti ka socda kuwaasoo booqda Magaalada Baladweyne tan iyo markii ciidamada Jabuutiyaanku la wareegeen gacan ku heynta B/weyne.